မဘသများ သတိမဘသများ ယခုအတိုင်း မြန်မာမွတ်ဆလင် ဆန့် ကျင်ရေး၊ ရိုဟင်ဂျာ ဆန့် ကျင်ရေးဆက်လက်၍ လုပ်နေမည် ဆိုလျှင်2015 ရွေးကောက်ပွဲ၌“ဖွတ်မရ ( ကြံ့ ဖွတ် ) ၊ ဒါးမဆုံး ( တရား ဓမ္မ )” ဖြစ်လိမ့် မည်။
This entry was posted on December 1, 2014 at 9:26 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
drkokogyi Says:	December 3, 2014 at 4:00 am | Reply Maung Maung Skw
drkokogyi Says:	December 3, 2014 at 5:48 am | Reply Master Pie ဘာလုပ်ရမလဲပြောပါဦး